दुई चरणमा निर्वाचन सत्ता लम्ब्याउने चालबाजी मात्रै हो - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
दुई चरणमा निर्वाचन सत्ता लम्ब्याउने चालबाजी मात्रै हो
० सरकारले सम्भवतः आज (मंगलबार) पुनः संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याउँदै छ, तपाईंको पार्टीले यसमा कसरी जाने तयारी गरिरहेको छ ?
– राष्ट्रहितविपरीत र जनताको विपक्षमा रहेको राष्ट्रका निम्ति पनि हितमा नरहेको संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनेर हामीले विगतदेखि भन्दै आयौं । ३८ दिनसम्म हामीले संसद्मा अवरोधको आन्दोलन पनि ग¥यौं । त्यो आन्दोलनको परिणामस्वरूप सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यो सरकारले गरेको सकारात्मक कदम हो । यो फिर्ता नलिँदासम्म त नयाँ दर्ता नै हुँदैनथ्यो । पुरानो फिर्ता लिएपछि सुन्नमा आएअनुसार उहाँहरूले नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो सचिवालयमा दर्ता हुने होला । हाम्रो पार्टीको सोमबारको बैठकले पनि विगतमा हामीले भन्दै आएझंै अहिले जुन ढंगका चर्चाका आधारमा संशोधनका विषयहरू अगाडि सारिएका छन्, ती विषयमा एमालेको समर्थन छैन ।
० तर, यो ल्याउन लागिएको संशोधन विधेयक त तपाईंकै पार्टीको समर्थनमा आउन लागेको भनिन्छ नि ?
– हाम्रो समर्थनमा आएको भनेर सरकारको ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूले जुन खालको प्रचार गरेका छन्, त्यो गलत हो । सोमबार बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले पनि त्यो कुराको खण्डन गरेको छ । फिर्ता लिने कुरामा हाम्रो सहमति छ, अरू एजेन्डामा हाम्रो विमति छ । प्रक्रियामा हामी कसरी अगाडि बढ्छौं भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले कस्ता–कस्ता मुद्दा कसरी अगाडि ल्याउँछ, त्यही हेरेर हुन्छ ।
० सीमाङ्कनको विषय थाती राखेर बाँकी विषयमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउने भनिएको छ, त्यसो हो भने एमालेलाई चाहिँ किन यत्रो आपत्ति ? विगतको संशोधनमा तपाईंहरूको मूल सरोकार त्यही सीमांकनमा नै त थियो नि ?
– पहिलाका चारवटा विषयमध्ये सिमानाको हेरफेर गर्ने कुरा प्रदेशको अनुमतिविना हँुदैन र यो असंवैधानिक भयो भन्ने कुरालाई रित पु¥याउनका लागि धारा २७४ संशोधन गर्ने भन्ने कुरा तलको सहमतिविना पनि गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा ल्याउन खोजिएको छ । हिजो असंवैधानिक भएको हुनाले जुटाइ खाइयो, त्यसो हुनाले त्यसलाई संशोधन गरेर संविधानसम्मत गरौं भन्ने देखिन्छ । तर, राष्ट्रको हितका विरुद्धमा काम गर्ने कुराप्रति यो सरकार दत्तचित्तका साथ लागेको देखिन्छ ।
० विगतमा संशोधन प्रस्तावलाई छलफलमै ल्याउन दिनुभएन, यसपटक चाहिँ के गर्नुहुन्छ ? छलफलमै ल्याउन नदिने कि ? छलफलमा ल्याउन दिने तर मतदान प्रक्रियामा भाग नलिने ?
– सरकारले हाम्रा नेताहरूसँग कुराकानी गरेको भनेको चाहिँ सिमानासहितको यो विषयलाई हामी फिर्ता लिन्छौं र नयाँ ढंगले सहमतिका साथ अघि बढौं भन्ने हो । यस्तो कुरा गर्दा हामीले त्यो सिद्धान्तमा सहमति गरेको हो । फिर्ता लिने कुरामा सहमति नै हो । सहमतिका साथ प्रस्ताव अघि लैजाऔं भन्ने कुराका लागि पनि हामी सकारात्मक नै थियौं । तर, सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विषय फेरि टेबुल गर्ने भन्ने जुन निर्णय ग¥यो, त्योभन्दा अगाडि हामीसँग कुराकानी भएर हाम्रो सहमतिका आधारमा विषय तय भएको छैन । दोस्रो, उहाँहरूले जे विषय ल्याउनुभएको भन्ने सुनिँदै छ, त्यो राष्ट्र र जनताको हितमा छैन । तेस्रो कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा यति क्लाइमेक्समा पुगेका बेला स्थानीय तहको संख्या बढाइदिन्छु, तलको अधिकार कटौती गरिदिन्छु भन्ने खालका कुराहरू गर्ने मौसम यो हो कि होइन ? हिजो चारवटा विषयमा अर्थात् हिन्दी भाषाको कुरा, जनसंख्याका आधारमा माथिल्लो सभा बनाउने कुरा, नागरिकताको सवालमा राखेको हाम्रो अठोट अहिले पनि यथावत् नै छ ।
० संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा मोर्चाले भाग लिन्नांै भनेका बेला दुई चरणमा निर्वाचन गराउने कुरा आएको छ । दुई चरणमा निर्वाचन गर्नकै लागि यो विधेयक ल्याउन खोजिएको पनि भनिन्छ नि ?
– दुई चरणको निर्वाचन भनेको सत्ता लम्ब्याउने कुरा मात्र हो । सत्ता लम्ब्याउनका लागि निर्वाचन नगर्ने बहाना खोज्नका लागि मात्रै हो । दुई चरणमा निर्वाचन हुँदै हँुदैन । दुई चरणको निर्वाचनको सम्भावना पनि छैन, त्यो औचित्यपूर्ण पनि छैन । एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग लागिरहेको छ । सरकारले आयोगलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार त्यो काममा छैन । सरकारको ध्यान त मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रमा छ ।
० संसद्मा गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि माग्नुभयो होइन ?
– अहिलेसम्म गृहमन्त्रीज्यूले जे भनिरहनुभएको छ, त्यो उहाँको कुरा हो । तर, मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको स्थिति र देशमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति हुनुप¥यो । घरमा बसेका वृद्ध, महिला, अपांगसहित आम जनताले राज्य छ, हामी सुरक्षित छौं भन्ने कुराको अनुभूति गर्न सकेनन् । सरकारमा बसेर त्यो कुराको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरू यी कुरामा उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो प्रश्न हामीले उठाएका छौं ।
० एमालेले कात्तिकमा चुनाव सार्न प्रस्ताव ग¥यो भनेर माओवादीका नेता वर्षमान पुनले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् ? के हो कुरा ?
– यो झूटको फेहरिस्त मात्र हो । दुनियाँले बुझिराखेका छन्, हामी अभियान चलाइराखेका छौं । तल–तल उम्मेदवार छान्न थालिसकेका छौं । चुनावको वातावरण बनाउने र प्रतिपक्षले आन्दोलन नै गरेन भन्ने खालको आरोप खेपी–खेपी यो चुनावमा सरकारलाई घिसारेर यहाँसम्म ल्याउन हामी लागिपरेका छौं । हामीलाई सत्तामा जाने कुनै हतारो पनि छैन, मोह पनि छैन । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति यो सरकारले निर्वाचन गनुपर्छ । निर्वाचन गराउने मूल्यमा प्रतिपक्षी भए पनि हामी सहयोग गर्छौं भनेर सुरुका दिनदेखि भन्दै आएका छौं । एमालेलाई बदनाम गराउन वा चुनाव नगराउने विभिन्न षड्यन्त्रभित्र एमालेलाई पनि मुछ्न यस्तो प्रचार गरिएको हो । त्यससँग हाम्रो कुनै साइनो सम्बन्ध छैन ।
० चुनावको तयारी निकै अगाडि बढिसकेको छ, तर सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा, सत्ताधारी दलका नेताका अभिव्यक्ति सुन्दा सरकारको नियत अझै चुनाव नगराउने नै जस्तो देखिन्छ, होइन ?
– राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएर अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूका कारण त्यो सरकार विस्थापित गरिएको र यो संविधान बनाउने नचाहने शक्तिकेन्द्रहरूको योजनामा वर्तमान सरकार निर्माण भएका कारण संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनका निम्ति विभिन्न षड्यन्त्र हुन सक्छन् भन्ने कुराको आशंका एक हदसम्म छ । तर, वातावरण, जनचाहनाको हिसाबले हेर्दा देशको माहोल निर्वाचनमा गइसककेको छ । त्यसैले गर्दा निर्वाचनको अर्को विकल्प पनि छैन, योभन्दा अर्को बाटो पनि छैन हामीसँग ।
को को प्लेकार्ड बोकेर निस्कन्छन्, त्यसको पनि हिसाव किताव राख्छौं
हो, म गुमनाम नै छु तर निस्क्रिय छैन
सभापतिले सम्पुर्ण गल्ती स्वीकार्नु भएको छ